Lumkela iintlobo ezixubekileyo zentlanzi | Ngeentlanzi
Ukuxuba iintlobo ezahlukeneyo zeentlanzi
UIldefonso Gomez | | Amanzi akwariyam akwariyam, Amanzi olwandle
Ngapha siye sathetha kakhulu malunga neeklasi kwaye iintlobo de intlanzi ezikhoyo. Njengoko usazi kakuhle, kukho iindidi ezahlukeneyo emhlabeni wonke, oko kuthetha ukuba sinokufumana yonke into. Ewe kunjalo, nganye yazo iyamangalisa ngakumbi kuneyokugqibela, ke ukuyifunda ayiyongcamango embi.
Nangona kunjalo, singathanda ukukubuza umbuzo: ngaba kuyingozi ukudibanisa ezi iintlobo? Ukuba kuye kwafuneka siyitsho ngamagama ambalwa, inyani yile siyenzayo. Iklasi nganye ineempawu kunye neemfuno zayo, ke ngoko ukuzidibanisa zonke kunokuba yingozi ekufuneka siyiphephe.
Masiyitsho ngamanye amagama, kunye nomzekelo. Makhe sicinge ukuba intlanzi ehlala elwandle, siyibeka kwenye indawo. Oku kuthetha ukuba kuya kufuneka uhlengahlengise. Kodwa ayizizo zonke iintlobo eziphumelelayo, ke kunokubangela ingxaki engaphezu kwesinye. Isisombululo, ewe,, kukuthintela zonke ezi zinto utshintsho.
Eyona nto icetyiswayo kukuthathela ingqalelo iimfuno kunye nokuhamba kweentlobo ezahlukeneyo zeentlanzi, oko kuthetha ukuba, kwezinye izinto ziqhelekile, kwabanye azifani, ukuze utshintsho kunye nokulungiswa kungaveliswa okungalunganga kubo. Hayi, ayingombono mhle ukudibanisa iintlobo zeentlanzi.
Masithi icacile. Ukuxuba iintlobo ezahlukeneyo okanye iintlobo zeentlanzi akulunganga. Ngaphezulu kwayo nantoni na, kwiimfuno zabo ezahlukeneyo. Ke, kwimeko apho olo luvo luza kwenzeka kuwe, akukhuthazwa ukuba uyenze. Ewe kunjalo, kukho imibutho eyahlukeneyo eyenze le nto, kodwa ihlala imalunga ootitshala.
Okokugqibela, ukuba ufuna ukuba nohlobo oluthile lweentlanzi endlwini yakho, kwaye awazi ukuba ungazifumana na, isindululo sethu kukuba uyakuyibona kwivenkile yezilwanyana zasekhaya, apho unokufumana khona nceda ngaphandle ngawo onke amathandabuzo onawo. Xa ungathandabuzeki, sele uyazi ukuba lonke uncedo lulungile.
Iinkcukacha ezithe xaxe - Zingaphi iintlobo ezikhoyo?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Amanzi akwariyam akwariyam » Ukuxuba iintlobo ezahlukeneyo zeentlanzi
Iintlanzi nazo zinomdla
Ikhonkco phakathi kookrebe nabantu